Ebusika, isikhumba sombuso sichazwe kakhulu kwimpembelelo yendalo, ngoko kubaluleke kakhulu ukunyamekela ngeli xesha lonyaka. Imaski yobuso busika ingathengwa kwisitolo sezonyiso, okanye iphekwe ekhaya. Iimaski ezizimeleyo ziza kunonondlo kwaye zisebenzise. Ubusika buso busika, ukuzenzela - ithuluzi elimangalisayo lonakekelo lolusu. I-remedy enjalo inceda ukukhusela isikhumba kwiqanda, ukukhuthaza ukuphucula nokutya kwazo zonke izinto eziyimfuneko.
Unonophelo olongezelelweyo lwasebusika alufunwa kuphela ngesikhumba esicabileyo nesomileyo, kodwa kunye nekhumba elinamafutha. Zonke iintlobo zesikhumba ziya kubonakala zibandayo. Ukulungiselela ubusika okunomsoco ebusweni ubuso abufuni iimveliso ezikhethekileyo. Zonke zokupheka zenziwe ngendlela enokuthi izithako ezakhiweyo zifumaneke kwiikhikhishini. Ukusetyenziswa kweemaski ezikhuselekileyo zasebusika ezikhuselekileyo zivumela ukucocisa ulusu ngama microelements ezibalulekileyo, izondlo kunye nezinye iivithamini kunye neemaminerali. Iimveliso zezityalo zonyango zenzeke ngokukhawuleza kunezinye iimveliso. Ngethuba elincinane, iifumba zasemakhaya ziyancipha kwaye ziphosa isikhumba. Banika ukunyaniseka kunye nokunyaniseka. Inzuzo ephezulu yobuso busika busika iindleko ezinokuhlawulekayo, indlela elula kwaye ekhawulezayo yokupheka. Ukongezelela, ukusetyenziswa kweemaski zasekhaya akubangeli ukubandezeleka, kuba sinokukwazi ukuphelisa izixhobo ezingafunekiyo. I-Cosmetics elungiselelwe ekhaya ngokupheka kwabantu, nayo ifanelekileyo kubasetyhini abangenakukwazi ukuchitha imali kwizonyango ezibizayo. Ama-Masks ayenzelwe ukunakekelwa kwesikhumba ebusika, aya kunceda abafazi babonakale behle kwaye bezilungele kakuhle.
Umask we-cottage ushizi kunye nezikhupha zeqanda
Ukwenza ubusika obusika, xuba iipunipoyi ezi-2 ze-fatty cottage cheese kunye ne-yolk enye yenkukhu yenkukhu. Yongeza i-1 tsp kumxube. ioli yeoli. Qhubeka uvuselela kude kube yimaski ithole ukuhambelana kokhilimu omuncu. Gqoka imaski elukhumbeni imizuzu eyi-15. Hlanganisa ngamanzi apholileyo ngaphandle kwesepha.
Mask of a mazambane
Ukulungiselela imaski, ngaphandle kweetatati, uya kufuna udani, i-glycerin kunye neoli yeoli. Thatha izithako eziyimfuneko kwixabiso elilinganayo kwaye udibanise kakuhle. Gxotha umxube ngeemitha ezingama-20 uze uhlanza ngamanzi apholileyo.
Umaski ovela kwimifuno
Ngexesha lokulungiselela iiembotyi ezimhlophe, kufuneka ushiye indebe encinci yeembotyi. Ukubakhubaza ngemfoloko uze uthule i-1 ithispoon yeoli yeoli kunye neetapuni ezintathu zejisi lemon. Ukulungele, umxube oxutywe ngokucophelela owenziwe esikhumbeni. Geza ngamanzi afudumele emva kwemizuzu engama-20. Emva kwemaski, supha isikhumba ngamanzi abandayo. Le maski iyamhlophe kwaye iyondla isikhumba.
Mask of Pumpkin Inyama
Ukuze wenze loo maski yasekhaya, kufuneka udibanise inyama yamathanga. Emva koko uze uhlaziye kwaye ungeze i-tablespoon eyi-1 ye-ukhilimu omuncu. Hlanganisa ngokucacileyo imaski elungiselelwe kwilinen ecocekileyo imizuzu eyi-15, uze uhlanza amanzi apholileyo. Emva koko, sebenzisa isikhumbuzo kwimeko ebusweni bakho. Le maski iyakususa ngokugqithiseleyo ukuvalelwa kwesikhumba ebusweni.
Umaski ovela kumpompo we-persimmon
I-Persimmon ilungele imaski yasebusika, kuba ngokuqhelekileyo kuthathwa njengobusika. Ifunyenwe kwi-mask ye-persimmon ebusweni iyancipha kwaye iqinisa isikhumba. I-pulp ye-persimmons kufuneka ifakwe kwi-gruel. Yongeza i-teaspoon yeoli yeoliva kunye nekhilimu omuncu kumxube. Ukuze ubunzima bube yingqimba, i-starch encinci yongezwa kuyo kwaye ixutywe kakuhle. Faka isicelo sokusihlamba isikhumba. Emva kwesigama seyure, hlamba umaski kunye ne-decoction ye-chamomile.
Isibini sasebusika saseJapan
Hlanganisa ubisi olutsha kwiindawo ezifanayo zobusi kunye nomgubo. Umxube obangelwayo usetyenziswa kwilusu iminyaka engama-30. Geza i-decoction ye-chamomile. Le maski igqibelele ebusika kwesikhumba esidala.
4 amathisipuni amanzi asandul 'ucoko odibeneyo kunye neepuniji ezi-2 zetiyimu kunye nejusi lemon. Umxube obangelwayo uxutywe kakuhle kwaye usetyenziswe ebusweni kunye nentamo yentamo imizuzu engama-20. Geza imaski ngamanzi ashushu nge-cotton swab. Emva koko supha isikhumba ngamanzi abandayo.
Iinqotyi zithwele i-grater edibeneyo kwaye zidibanise kunye namaconsi ambalwa omnquma okanye ioli ye-almond. Faka isicelo umxube ebusweni bakho imizuzu engama-20. Hlanganisa ngamanzi ahlukeneyo.
Ubusika obusika beoli
Ngomnquma ofudumeleyo okanye ioli yelanga, faka iibhotile ezininzi ze-vitamin A kunye ne-vitamin E. Faka isicelo semaski ngegreyze. Ukwenza oku, phawula izimbobo kwisiqwenga esikhulu se-gauze kwamehlo nangomlomo. Gauze umanzi ngomxube wamafutha kunye namavithamini kwaye usebenzise ubuso kunye nentamo. Inqubo kufuneka iphindwe kabili amaxesha amathathu kwisigamu seyure. Bese uhlamba ngamanzi afudumele kwaye utyumle kancane ngehayile. Ubume obuncinci bemaski kufuneka buhlale ekhumbeni.
Mask kusuka kwiklabishi
Ebusweni nasentanyeni, faka amaqabunga e-sauerkraut. Emva kwemizuzu engama-20, susa amaqabunga, hlamba ubuso kunye nentamo ngamanzi apholileyo kwaye usebenzise ukhilimu onondla.
Umaski wesikhumba sobuso obunamafutha
Ukwahlula iqanda elimhlophe kwi-yolk yolanga. Iiprotheyini zibethelwa kwi-foam, yongeza ijusi efakwe kwi-lemon. Faka isicelo somxube obangelwayo ngebhashi okanye i-swab. Lindela de kube i-mask isomile kwaye ubuso buhlanganiswe nefilimu emncinci. Emva koko, sebenzisa isalathisi sesibini, kwaye ukuba ulusu lukhuni kakhulu, sebenzisa kunye nesigaba sesithathu. Emva kwemizuzu eyi-15, uhlambe umququ ngamanzi abandayo.
Ubusika obusika bamaapulo
Ngomlinganiselo omncinci wobisi, ubilise i-apula ephakamileyo edibeneyo. Emva kokubunjwa kwe-gruel eninzi, cima ubisi uze uyipholise. Ukufudumala i-gruel imizuzu engama-20 ukubeka ubuso. Emva koko uhlambe ngamanzi apholileyo.
Isiqingatha ipakethe yesilonda emlilweni. Umxube obangelwayo kufuneka usetyenziswe ebusweni aze agcinwe kude kube yome. Emva koko, hlamba imaski ngamanzi apholileyo okanye i-decoction ye-chamomile. Le maski ihambelana neengxaki zesikhumba, kunye ne-acne kunye nebala. Ukuba ulusu lumile, faka iitropu zomnquma okanye ioli ye-almond kwi-mask.
Ubusika obusika bekhumba
Iingxenye ezilinganayo zebhotela, i-yoghurt, ukhilimu omuncu okanye umxube we-yogurt kwaye usebenzise esikhumbeni imizuzu eyi-15. Emva koko, hlamba ngamanzi abandayo. Le maski ayifanele isetyenziswe kwesikhumba ejikeleze amehlo.
Ukwahlula amaqanda abamhlophe kwi-yolk. Hlaza izikhupha uze usetyenzise elukhumbeni isiqingatha seyure. Le maski ayincinci kuphela iipilisi zesikhumba, kodwa iphinda ihlaziye ngokucacileyo isikhumba kwaye ikhusele ebusweni nangomoya.
Mask for skin association
Lungisa i-puree yebhanana. Hlanganisa kwiindawo ezilinganayo kunye nekhilimu uze usebenzise ebusweni malunga nesiqingatha seyure. Gcoba ngamanzi apholileyo.
Inyama ye-avocado enefoloko uze ungeze amaconsi ambalwa eoli yeoli. Ubunzima obangelwayo busetyenziswa kwesikhumba, ngaphandle kwesikhumba ecaleni kwamehlo, shiya imizuzu engama-20 uze uhlanza ngamanzi afudumele.
Ubusika okhuselayo obusika
Hlanganisa ngokupheleleyo inani elifanayo leengqayi zamaqanda, i-oatmeal kunye nobusi. Umxube obangelwayo kufuneka usetyenziswe imizuzu engama-20. Geza ngamanzi afudumele, emva koko umise ubuso bakho ngesilula esilula.
Iingxabano malunga nokuphakamisa: I-Cream Liqiuskin okanye iBotox?
Ukulimala kwe-coccyx, emuva nangomlenze kumntwana
Charlotte nge rhubarb
Umfazi onesizungu ufuna ukudibana nawe
Ukuhlinzwa ngoplastiki yabantwana, ukucoca
Unokunyamekela njani umthandayo
I-Horoscope ngoNovemba 2017 - ibhinqa-i-Libra - ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl
Yintoni ongayinika umhlobo weSuku lweValentine?
AmaSandwich kunye noshi
Iimpazamo ezenziwa ngabasetyhini emsebenzini
I-Horoscope ngo-Septemba 2017 kubafazi-iSagittarius
IHoroscope yokuhamba ngo-2014: phi na ukuya kuphumla?